ဒီလိုအိမ်မက်တွေ မက်ခဲ့ရင် မဖြစ်မနေ ထီထိုးပါ … – Pwintsan
ဒီလိုအိမ်မက်တွေ မက်ခဲ့ရင် မဖြစ်မနေ ထီထိုးပါ …
June 25, 2020 ဗဟုသုတများ, ဗေဒင်
(၁) အိမ်မက်မြင်မက် ရာတွင် ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ကြီးဖြစ်စေ ကြွရောက် လာပြီးလျှင် သင်အလိုရှိသော ဆန္ဒပြည့်ဝစေပါမည်။တရားကိုသာ အားထုတ်ပါဟု မိန့်ဆိုခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊သို့မဟုတ် မည်သည့်ကိစ္စကို ဆော င်ရွက်၍
မည်သို့ ပြုလုပ်ပါဟု မှာကြားခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊အိမ်မက်တွင် မြင်မက်ရပါက နတ်ကြီး၊ ဝိဇ္ဇာကြီးများနှင့် တွေ့ရသော အိမ်မက်သည်။ ထီပေါက်မည့် အိမ်မက်ဖြစ်သည် …။
(၂) ရွံဖွယ်အတိဖြစ်သော မစင်များကို ပိုးလောက် တို့နှင့်တကွ မြိန်ရှက်စွာ သုံးဆောင်ရသည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ မိမိကိုယ်၌ မစင်လိမ်းကျံရခြင်း၊မစင်တွင်းကြီးထဲ သို့
ကျရောက်ရခြင်း လူတဦးတစ်ယောက်က မစင်များ ကို ထုတ်ပေး သည်ဟု မြင်မက်ရခြင်း၊ ပိုးလောက်တို့သည် မိမိကိုယ်၌ အထပ်ထပ် ကပ်ရောက်သည်ဟု မြင်မက်ခြင်းတို့သည် ထီပေါက်တတ်သော အိမ်မက်များဟု ဆိုလိုသည် …။
(၃) ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ကြီးထံမှ၎င်း၊ ရသေ့ရဟန်းထံမှ၎င်း၊မွန်မြတ်သော သစ်သီးတစ်ခုခုကိုရသည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ သစ်ပင်တပင်ပေါ်မှသစ်သီးများ ရှိသည့်အနက်….
ထိုသစ်သီး တို့ကို ဆွတ်ယူ၍ စားရသည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ၊အခြား အကူအညီ တစ်ခုခုကြောင့် ဆွတ်ခူး၍ရသည်ဟု မြင်မက်ခဲ့ေ သာ် ထီပေါက်တတ်သည် …။
(၄) လူသေကောင် ၏ အသားကို စားရသည်ဟု မြင်မက်သော်လည်းကောင်း၊ လူသေကောင်၌ ပိုးလောက်တို့ ဖြင့် ပြည့်နှက်လျှက် ထိုအသား ကို မြိန်ရှက်စွာ စားရသည်ဟု မြင်မက်သော်လည်းကောင်း ၊လူ၏အချင်း လူ၏အူတို့ကို စားရသည်ဟု မြင်မက်သော် ထီပေါက်မည့် အိမ်မက် ဖြစ်သည် …။
(၅) အဖိုအနဂ္ဃ ထိုက်တန်လှစွာသော ပတ္တမြား ရတနာကို ဖြစ်စေ မွန်မြတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းတခုခုကိုဖြစ်စေ၊ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ် ကြီးတဦးကယူဆောင်လာပြီး ၎င်းပစ္စည်းသည်
သင့်အဖို့ အကျိုးခံစားပါလော့ဟု ပြောဆို၍ ပျောက်ကွယ်သွားသည်ဟု မြင်မက်ခဲ့သော် ထီပေါက်တတ်သည် …။
(၆) နေ လ ကြယ်တို့ကို မိမိကိုယ်တိုင်ဆွတ်၍ လက်တွင်းသို့ ရောက်သည် ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ၊ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်စွာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တစ်ဦးဦးက ဆွတ်၍ပေးသည်ဟု
မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ၊နေ၊လ၊ကြယ် နက္ခတ်တို့သည် ကြွေ၍ ကျသည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ ထီပေါက်နိုင်သော အိမ်မက်ဟု ဆိုလိုသည် …။
(၇) မြွေပွေး မြွေဟောက် စသော တိရစ္ဆာန် များသည် တခုသော တောင်ပို့တွင် ဖြစ်စေ၊ကုန်းမြင့်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊တစုံတခုသော အိုးခွက် စသည်တို့၌ တည်ရှိနေ၍ ၎င်း မြွေများကို မိမိကိုယ်တိုင် နှိမ်နင်း၍ အတွင်းရှိ ပစ္စည်းများကို သုံးဆောင်ရသည်ဟု မြင်မက်ခဲ့သော် ထီပေါက်မည့် အိမ်မက် ဖြစ်သည် …။
(၈) အဘိုးအနဂ္ဃ ထိုက်တန်လှသော ရွှေကြက်ဥကိုဖြစ်စေ၊ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်စွာရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်က လာရောက်၍ ပေးသည်ဟု မြင်မက်ခြင်းတို့သည် ထီပေါက်မည့် အိမ်မ က်ဖြစ်သည် …။
(၉) နွားကိုစီး၍ မြို့ရွာသို့ လှည့်လည် ရသည်ဟု မြင်မက်သော်၎င်း၊လူစည်ကားသောအရပ်တွင် မိမိက နွားကိုစီး၍ လူအပေါင်းတို့နှင့် လှည့်လည်ရသည်ဟု မြင်မက်သော် ၎င်း
၊နွားကိုစီး၍ ထင်ရှားကျော်စောသည်ကို မြင်မက် ခဲ့သော် ထီပေါက်တတ်သော အိမ်မက်များ ဟုဆိုလိုသ ည် …။
(၁၀) လူ၏ရင်ကိုခွဲ၍ သွေးကိုသောက်ရခြင်း သွေးကိုရေချိုးရခြင်း၊ ဥအမျိုးမျိုးကို စားသုံးရခြင်း၊ငါးအမျိုးမျိုးကို ဖမ်းရခြင်းစသော အိမ်မက်မျိုးသည်လည်း ထီပေါက်နိုင်သော နိမိတ်ပြအိမ်မက်ဟု ဆိုသည် …။
(၁၁) ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိသော ရွှေဥဒေါင်းငှက် သည် အရပ်တခုမှပျံသန်း၍လာပြီးလျှင်မိမိဦးခေါင်းပေါ်သို့ မစင်စွန့်သည်ဟုမြင်မက်သော်လ ည်းကောင်း တခုခုသောငှက်သတ္တဝါသည် အစာကိုချီ၍ ပျံသန်းလာရာ
ထိုအစာကို မိမိ လက်ဝယ်သို့ရသည်ဟု မြင်မက်သော် လည်းကောင်း ထိုသို့အိမ်မက် တို့သည် ထီပေါက်မည့် အိမ်မက်မျာြး ဖစ်သည် …။
အိမ်မက် မက်ရာတွင် ကုသိုလ် ကံကို အကြောင်းပြုပြီး မက်တဲ့ အိမ်မက် သွေးလေခြောက်ခြားပြီး မက်တဲ့ အိမ်မက် ရှေ့ယခင်က ခံစားဖူးတာကို အကြောင်းပြုပြီးမက်တဲ့ အိမ်မက် နတ်တို့လှည့်စားလို၍ မက်တဲ့ အိမ်မက် ဟူ၍ရှိပါသ ည် …။ ။
ဒီအိမျမကျ တှေ မကျခဲ့ ရငျ မဖွဈ မနေ ထီ ထိုးပါ …
ထီ ပေါကျ မယျ့ အိမျမကျ
(၁) အိမျမကျမွငျမကျ ရာတှငျ ဝတျဖွူစငျကွယျနှငျ့ လူပုဂ်ဂိုလျ ကွီးဖွဈစေ ကွှရောကျ လာပွီးလြှငျ သငျအလိုရှိသော ဆန်ဒပွညျ့ဝစပေါမညျ။တရားကိုသာ အားထုတျပါဟု မိနျ့ဆိုခဲ့သညျဖွဈစေ၊သို့မဟုတျ မညျသညျ့ကိစ်စကို ဆောငျရှကျ၍
မညျသို့ ပွုလုပျပါဟု မှာကွားခဲ့သညျဖွဈစေ၊အိမျမကျတှငျ မွငျမကျရပါက နတျကွီး၊ ဝိဇ်ဇာကွီးမြားနှငျ့ တှရေ့သော အိမျမကျသညျ။ ထီပေါကျမညျ့ အိမျမကျဖွဈသညျ …။
(၂) ရှံဖှယျအတိဖွဈသော မစငျမြားကို ပိုးလောကျ တို့နှငျ့တကှ မွိနျရှကျစှာ သုံးဆောငျရသညျဟု မွငျမကျသညျဖွဈစေ မိမိကိုယျ၌ မစငျလိမျးကြံရခွငျး၊မစငျတှငျးကွီးထဲ သို့
ကရြောကျရခွငျး လူတဦးတဈယောကျက မစငျမြား ကို ထုတျပေး သညျဟု မွငျမကျရခွငျး၊ ပိုးလောကျတို့သညျ မိမိကိုယျ၌ အထပျထပျ ကပျရောကျသညျဟု မွငျမကျခွငျးတို့သညျ ထီပေါကျတတျသော အိမျမကျမြားဟု ဆိုလိုသညျ …။
(၃) ဝတျဖွူစငျကွယျနှငျ့ လူပုဂ်ဂိုလျ ကွီးထံမှ၎င်းငျး၊ ရသရေ့ဟနျးထံမှ၎င်းငျး၊မှနျမွတျသော သဈသီးတဈခုခုကိုရသညျဟု မွငျမကျသညျဖွဈစေ သဈပငျတပငျပျေါမှသဈသီးမြား ရှိသညျ့အနကျ….
ထိုသဈသီး တို့ကို ဆှတျယူ၍ စားရသညျဟု မွငျမကျသညျဖွဈစေ၊အခွား အကူအညီ တဈခုခုကွောငျ့ ဆှတျခူး၍ရသညျဟု မွငျမကျခဲ့သျော ထီပေါကျတတျသညျ …။
(၄) လူသကေောငျ ၏ အသားကို စားရသညျဟု မွငျမကျသျောလညျးကောငျး၊ လူသကေောငျ၌ ပိုးလောကျတို့ ဖွငျ့ ပွညျ့နှကျလြှကျ ထိုအသား ကို မွိနျရှကျစှာ စားရသညျဟု မွငျမကျသျောလညျးကောငျး ၊လူ၏အခငျြး လူ၏အူတို့ကို စားရသညျဟု မွငျမကျသျော ထီပေါကျမညျ့ အိမျမကျ ဖွဈသညျ …။
(၅) အဖိုအနဂ်ဃ ထိုကျတနျလှစှာသော ပတ်တမွား ရတနာကို ဖွဈစေ မှနျမွတျသော ဝတ်ထုပစ်စညျးတခုခုကိုဖွဈစေ၊ဝတျဖွူစငျကွယျနှငျ့ပုဂ်ဂိုလျ ကွီးတဦးကယူဆောငျလာပွီး ၎င်းငျးပစ်စညျးသညျ
သငျ့အဖို့ အကြိုးခံစားပါလော့ဟု ပွောဆို၍ ပြောကျကှယျသှားသညျဟု မွငျမကျခဲ့သျော ထီပေါကျတတျသညျ …။
(၆) နေ လ ကွယျတို့ကို မိမိကိုယျတိုငျဆှတျ၍ လကျတှငျးသို့ ရောကျသညျ ဟု မွငျမကျသညျဖွဈစေ၊ဝတျဖွူစငျကွယျစှာနှငျ့ ပုဂ်ဂိုလျကွီး တဈဦးဦးက ဆှတျ၍ပေးသညျဟု
မွငျမကျသညျဖွဈစေ၊နေ၊လ၊ကွယျ နက်ခတျတို့သညျ ကွှေ၍ ကသြညျဟု မွငျမကျသညျဖွဈစေ ထီပေါကျနိုငျသော အိမျမကျဟု ဆိုလိုသညျ …။
(၇) မွှပှေေး မွှဟေောကျ စသော တိရစ်ဆာနျ မြားသညျ တခုသော တောငျပို့တှငျ ဖွဈစေ၊ကုနျးမွငျ့ပျေါတှငျဖွဈစေ၊တစုံတခုသော အိုးခှကျ စသညျတို့၌ တညျရှိနေ၍ ၎င်းငျး မွှမြေားကို မိမိကိုယျတိုငျ နှိမျနငျး၍ အတှငျးရှိ ပစ်စညျးမြားကို သုံးဆောငျရသညျဟု မွငျမကျခဲ့သျော ထီပေါကျမညျ့ အိမျမကျ ဖွဈသညျ …။
(၈) အဘိုးအနဂ်ဃ ထိုကျတနျလှသော ရှကွေကျဥကိုဖွဈစေ၊ဝတျဖွူစငျကွယျစှာရှိသော ပုဂ်ဂိုလျတဈဦးတဈယောကျက လာရောကျ၍ ပေးသညျဟု မွငျမကျခွငျးတို့သညျ ထီပေါကျမညျ့ အိမျမကျဖွဈသညျ …။
(၉) နှားကိုစီး၍ မွို့ရှာသို့ လှညျ့လညျ ရသညျဟု မွငျမကျသျော၎င်းငျး၊လူစညျကားသောအရပျတှငျ မိမိက နှားကိုစီး၍ လူအပေါငျးတို့နှငျ့ လှညျ့လညျရသညျဟု မွငျမကျသျော၎င်းငျး
၊နှားကိုစီး၍ ထငျရှားကြျောစောသညျကို မွငျမကျ ခဲ့သျော ထီပေါကျတတျသော အိမျမကျမြား ဟုဆိုလိုသညျ …။
(၁၀) လူ၏ရငျကိုခှဲ၍ သှေးကိုသောကျရခွငျး သှေးကိုရခြေိုးရခွငျး၊ ဥအမြိုးမြိုးကို စားသုံးရခွငျး၊ငါးအမြိုးမြိုးကို ဖမျးရခွငျးစသော အိမျမကျမြိုးသညျလညျး ထီပေါကျနိုငျသော နိမိတျပွအိမျမကျဟုဆိုသညျ …။
(၁၁) ကကျြသရမေင်ျဂလာရှိသော ရှဥေဒေါငျးငှကျ သညျ အရပျတခုမှပြံသနျး၍လာပွီးလြှငျမိမိဦးခေါငျးပျေါသို့ မစငျစှနျ့သညျဟုမွငျမကျသျောလညျးကောငျး တခုခုသောငှကျသတ်တဝါသညျ အစာကိုခြီ၍ ပြံသနျးလာရာ
ထိုအစာကို မိမိ လကျဝယျသို့ရသညျဟု မွငျမကျသျော လညျးကောငျး ထိုသို့အိမျမကျ တို့သညျ ထီပေါကျမညျ့ အိမျမကျမြားဖွဈသညျ …။
အိမျမကျ မကျရာတှငျ ကုသိုလျ ကံကို အကွောငျးပွုပွီး မကျတဲ့ အိမျမကျ သှေးလခွေောကျခွားပွီး မကျတဲ့ အိမျမကျ ရှယေ့ခငျက ခံစားဖူးတာကို အကွောငျးပွုပွီးမကျတဲ့ အိမျမကျ နတျတို့လှညျ့စားလို၍ မကျတဲ့ အိမျမကျ ဟူ၍ရှိပါသညျ …။ ။
လိပ်ခေါင်းရောဂါအတွက် ငွေမကုန်တဲ့ ဆေးတစ်ခွက်
သုံးရက်အတွင်း ခြေလက်တွေ ဖြူဖွေးလာတဲ့ အိမ်တွင်းဆေး…